TAFIKA MALAGASY: TSY HIHEMOTRA AMIN’NY FANDOTOANA ATAON’NY DAHALO AMBONY LATABATRA
On oct 28, 2019 8 546
MIsedra fanamby iray hafa ny Tafika Malagasy, ankehitriny. Raha mizotra tsara, araka ny lamina napetraka ny hetsika manokana Zones Rurales Prioritaires de Sécurité na ny ZRPS, manao ny atao kosa ireo heverina ho dahalo ambony latabatra. Tsy mikely aina ireto farany, mandoto sy miampanga ny miaramila ho manao kolikoly na manao fanaparam-pahefana, na ho mandika lalàna tsotra izao.
» Misy ny andian’olona izay voakarama, mitety haino aman-jery handotoana anay. Misy ireo haino aman-jery izay mandray vola amina tapitrisa, mba hanaratsiana sy hanenjehana ny hetsika ataon’ny Tafika. Efa hitam-poko hitam-pirenena anefa ireny olona miteny ireny fa dahalo na mpiray tsikombakomba amin’ny dahalo. Fanampim-baovao ho anareo; misy nandray 60 tapitrisa Ariary ny haino aman-jery iray. Tsy vitan’izany, mahavita mametraka mpanao gazety any amin’ny toerana tsy ampoizinao izany izy ireny, ary tsy manana asa atao afa-tsy mitatitra zavatra ratsy « , hoy ny fanazavana nomen’ny avy amin’ny fibaikoana ny Tafika Malagasy.
Manamafy izany ny Kolonely Rakotoniaina Maminirina, lehiben’ny hetsika eo anivon’ny Tafika Malagasy, nandritra ny resaka nifanaovana taminy, tany Ankazobe ny sabotsy lasa teo. » Misy tokoa ireo dahalo ambony latabatra ireo, manomboka mipoitra tsikelikely izy ireny, ary mazava ho azy fa ho azo moramora rehefa voafehy ny mpanatanteraka ny asa ratsy any ifotony. Mba azonareo mpanao gazety an-tsaina ve hoe, misy mpiasan’ny distrika, misy préfet taloha anie ao anatin’io. Omby manodidina ny 2000 no tratra sy voagejan’ny miaramila noho izy ireo tsisy taratasy. Tampoka, anatin’ny roa na telo andro, misy olona mitondra taratasin’omby an’arivony. Ankoatra izay, mikasika ny basim-borona tratra. Basy nafarana avy any Rosia, izay tratra eny am-pelatanan’ny dahalo, tratra ambodiomby. Anatin’ny herinandro, misy olona tonga miaraka amin’ny taratasy, mankeny amin’ny toby miaramila RTS, izay higiazana ny basy tratra hatreto. Misy ny olom-boafidy, manao fanelanelanana, na miaro mihitsy ny havany dahalo. Fa izao: izahay eo anivon’ny Tafika Malagasy, dia tsy hanaiky lembenana, tsy mandray tsindry izany. Raisina ho mpiray tsikombakomba amin’ny olon-dratsy izay manao izany, ary azo henjehina amin’ny lalana »; hoy izy nanazava.
Ny lehiben’ny faritra ZRPS any Atsimo, ny Jeneraly Andriamasimanana William, izay manana ny foibeny ao Ihosy, ary anisan’ny lasibatry ny dahalo ambony latabatra ankehitriny dia hentitra namaly ny fanankianana sy fiampangana azy ireo: » Tsy hitory teny no andehanana any Atsimo, tsy hanome fahafaham-po ny olon-dratsy, ka miala tsiny aho, fa hitohy ny asa. Tsy maintsy ho fongorinay ny asan-dahalo ary io hatrany amin’ny faritra tena heverina ho tena henjana indrindra. Tsy hitsitsy izahay, indrindra koa amin’ireo mpiaro olon-dratsy ireo. efa isaorana sahady ny finiavan’ny eo anivon’ny Zandariamariam-pirenena sy ny Fitsarana izay nampiseho fahavononana amin’ny fanenjehena ireny sokajin’olona ireny satria izy ireo no manana ny sata ho mpanao famotorana sy mamoaka ny didy famaizana. Tiako asiana tsindri-peo, fa rehefa tsy manaiky ny handray volany ianao dia haratsiany. Izaho manokana dia efa nisy nanome volabe 300 tapitrisa saingy rehefa tsy nanaiky aho dia ny ZRPS izay tarihiko, no homentsiny sy lotoina. Haveriko fa tsy hitsangatsangana na hitory teny izahay ka tsy misy mahasakana ny asanay », hoy izy namaly ny voalaza ho mpanaratsy ny Tafika Malagasy.
Milaza ny tsy hanaiky ny fandotoana sy ny fanenjehana be fahatany ny Tafika Malagasy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Fibaikoana sy ny Minisitera mpiahy. Hisy ny fandraisana andraikitra mifanaraka amin’izay.
VONO OLONA: LEHILAHY MIISA 16 NAIDITRA AM-PONJA AO TSIAFAHY
BNGRC: REMISE DE MATÉRIELS ET D’ÉQUIPEMENTS PAR LA BAD